Shapewear Inopa Instant Miderals Slimming
Wakamboyamwa here mudumbu mako kare uye uchiibata? Ehe, chimiro chechimiro chinogona kupa iwo kutarisa ipapo pakarebesa pasina kana kunetseka nekuyamwa mudumbu rako. Icho chikonzero ndechekuti chimiro chekupfeka chinotevedzera mhedzisiro yekuyamwa mukati nekubata bata gumbu rako, dumbu renzvimbo, uye rudo runobata, kubvisa kushushikana kusingaperi kwekufanirwa kurangarira kuramba wakayamwa mukati.
Yokusingaperi Yakareba Nguva Yekutenderera Zvinangwa
Nepo iwe uchigona kuve neako akareba zvinangwa zvakadai sekusvika kune imwe huremu kana tarisa chimiro chechimiro chinogona kukupa iwe ipapo miganho inononoka.
Mamwe maShapewear anopa kwakanaka-kwezuva rose kunyaradzo nepakati rutsigiro apo vamwe vanopa rutsigiro rwakasimba uye rwakanaka kupfeka kwemaawa mashoma pamhemberero dzakadai semichato, mapato, zviitiko zvikuru, nezvimwewo…
Sezvo ivo vachigona kukubatsira iwe kukakaidzika nyore nyore mune chero yakasimba yakakodzera kana kuyerera kupfeka kana masiketi. Hazvina mhosva kuti muviri wako rudzi rwemapfekete mapfekete anogona kubatsira neakanyanya kutsanangurwa chiuno.
Shapewear Inopa Zvimwe Kuvimba
Kuwedzerwa kuvimba kunogona kunge kuri kwakanyanya uye kwakakosha mabhenefiti ayo chimiro. Wakambonzwa nezve mazwi ekuvimba kwevatengi? Kuvimba nehupfumi, kuzvivimba? Pane chikonzero nei kuvimba kuchiyerwa. Semuenzaniso, kana kuvimba nevatengi kuri pasi vanhu vanoshandisa kuchengetedza yakawanda uye kushandisa shoma
Kana kuzvivimba kwedu kuderera Izvi zvinogona kutungamira kune zvishoma zvekuita kwemuviri, kudya zvakanyanya, kusabuda, uye zvinogona kukonzera kushungurudzika.
Chimwe chinhu chakareruka sekupfeka zvipfeko zvemukati chinogona kukwidziridza kuzvivimba kwako uye nekukupa iyo mupendero unofanirwa kuti unzwe zvakanyatsonaka. Paunonzwa zvirinani nezvako zvinotungamira kuchikwata chezviito zvidiki izvo zvinoguma zvaita kuti unzwe zviri nani. Iwe unonzwa kufara, iwe unotanga kudya zviri nani, kurovedza muviri zvakanyanya, kuenda kunze zvakanyanya, uye kupenya simba rakasimba rinokwezva kwazvo.
Nzvimbo Yakanaka Yepamhepo
Kuwedzeresa kwemaitiro kwakati ndekwe imwe yedzimwe bhenefiti yakanakira yekupfeka zvipfeko. Vatengi vedu vanofarira rubatsiro urwu uye vanoshamiswa kwazvo nekuwanikwa uku. Izvi zvinonyanya kuitika kana tasvika pakupfeka chiuno chitima. Kugadzirwa kwechiuno uye kumanikidza kwahunopa kunoita kuti iko iko kumashure kwako kuchiramba kuchinetseka.
Izvi zvinobatsira iwe zvisinei nekuti wakagara, umire, kana kufamba kwenguva yakareba. Izvi zvakanaka kana uine basa rinoda kuti ugare padhesiki zuva rese sezvo vakadzi vazhinji vanowanzo kukotsira izvo zvinogona kutungamira kumatambudziko kumashure
Iyo yekuwedzera yakamira yakanakira musana wako uye inogona kudzivirira chero ramangwana matambudziko kubva kumuka. Imwe bhenefiti yakawedzera yekumira inopa kutaura kusiri kwerudzi. Zvakare, nokungo famba wakamanikana unopa kutarisa kwakasimba uye izvi zvinogona kutumira mameseji asina simba kumunhu wese kusanganisira iwe pachako. Nekumira tadhi takareba kupfuura zvakajairwa.
Mashamba Anogona Kubatsira Nekuenda kumwedzi Mahara
Zvave zvichiratidzwa kuti chimiro chechimiro hachibatsire kuderedza marwadzo ekuenda kumwedzi. Kusatombo kunetseka nezve kurwadziwa kana uchinge uchishanda kana kuti uri parwendo inyaradzo huru.
Paunenge uchipfeka zvekupfeka, chiuno varairidzi, kana ma corsets, iwo mafiratificha anoisa kumanikidzwa padunhu kusanganisira nhengo dzemukati dzinobatsira nezvibvumirano zvechibereko. Iko kudzvanywa kweiyo huru kunoderedza marwadzo mudunhu repakati.
Kukurudzira kune Upenyu Huri nane uye Hutano Hupenyu
Ngatizvitarisei chipinganidzo chikuru pakuderedza uremu, kurovedza muviri, uye kuenda kunzvimbo yekurovedza muviri ndiko kutanga kuwana kukurudzira kwekutanga. Zvino kunyangwe tapedza isu tinosangana nedambudziko rekuchengeta iko kukurumidza kuenda uye kuramba kuchichinjika.
Izvi zvinonyanya kuitika kana uine basa, vana, kana uri muukama. Unozvikurudzira sei kuwana nguva yekuwana muviri waunoda kana iwe wakaneta, nguva-yakanyimwa, wakabatikana zvakanyanya, uye uine zvimwe zvinhu mupfungwa dzako?
Zvakaoma kutanga kuchinja, kunyanya chikuru sekudya uye kurovedzera muviri. Asi iyo rwendo kune chiuru matanho anotangira nedanho rekutanga. Ndipo ndipo panopfeka hembe dzekupfeka dzinogona kuita mutsauko wakakura. Vanhu vazhinji vane humbowo uhu hwekuti kana vachitanga havana kuchinja chero mararamiro kusvikira vaona zvavakaitirwa nemaficha, uye kana vaona chete zvavakaita, kurumbidza kwavakawana uye kugona kuona kuti miviri yavo ingaratidzika sei, zvakavapa kukurudzira kuti vatange.
Vakatanga kumuka kumberi kuti vaende kumochari pamberi pebasa, vachitsvaga simba rekuenda mushure mebasa. Vamwe vaisvika kumabasa ekudzidzira kumba uye vakazvibatanidza muhupenyu hwavo. Vakatanga kugadzira chikafu nekumberi nekuchinja zvavo zvekudya. Vakatanga kuzviitira nguva yavo sevakadzi vazhinji vachikanganwa kuzviwanira nguva yavo sevanobatikana kuita zvinhu zvevamwe.
Asi zvese zvinotanga nechimwe chinhu chidiki uye icho chidiki chidiki chinotungamira kune dzimwe shanduko muhupenyu hwako, uye ipapo iwe unozoona kuti mararamiro ane hutano anongoitawo chikamu chehupenyu hwako uye anova maitiro.